AKHRISO : Wadamada u Soo Baxay Koobka Aduunka ee Rushka -
HomeciyaarahaAKHRISO : Wadamada u Soo Baxay Koobka Aduunka ee Rushka
AKHRISO : Wadamada u Soo Baxay Koobka Aduunka ee Rushka
October 11, 2017 F.G ciyaaraha 0
Koobka Aduunka waa dhacdada ugu weyn ee dunida kubadda cagta, ee Qarnigii 21-aad Waxaana la rajeynayaa inuu ka Dhaco wadanka Rushka Waqtiga xagaaga Nagu soo aadan, balse waxaa jira dagaal u dhaxeeya wadamada dunida kuna saabsan cidii ka soo qeyb gali laheyd Ciyaarahaas.
Loolanka ay wadamada ugu jiraan koobka Aduunka waa mid maraya heerarkiisii ugu dambeeyay, waxaana idinku Soo Bandhigaynaa wadamada ilaa iyo haatan la xaqiijiyay iney ciyaarayaan koobka Aduunka sanadka Nagu soo aadan.
WADAMADA SOO BAXAY:
Qaaradda Yurub waxey xaq u leedahay 13-wadan iney uga qeyb galaan koobka Aduunka – ilaa iyo haatan 9-wadan kaliya ayaa la xaqiijiyay kuwaas oo si toos ah awoodooda u muujiyay. (Belgium, England, France, Spain, Poland, Germany, Iceland, Serbia & Portugal).
Waxaa jira 8-wadan oo la isku beegi doono kuwaas oo maraya habka loo yaqaano [Play-offs], waxeyna kala yahiin: Switzerland, Italy, Croatia, Denmark, Sweden, Greece, Nothern Ireland & Republic of Ireland.
Qaaradda Koonfurta America: Qaaradda Koonfurta America waxey xaq u leedahay kaliya 5-wadan, afar wadan oo si toos ah uga qeyb galaya iyo 1-wadan oo maraya isreeb-reeb.
Wadamada sida tooska ah usoo gudbay: Brazil, Uruguay, Argentina, Colombia.
Wadanka Peru ayaa maraya isreeb-reeb [Play-offs] – waxeyna la ciyaari doonaan wadanka New Zealand.
Qaaradda Waqooyiga America: Qaaradaan waxaa uga qeyb gali kara tartanka ugu badnaan 4-wadan, 3-ka mid ah waxey usoo aadayaan si toos ah halka wadanka kale uu Play-off la gali doono wadanka shanaad ee Asia.
Sadexda wadan ee ilaa iyo haatan xaqiijiyay: Mexico, Costa Rica & Panama.
Dalka Honduras ayaa mari doona play-off wuxuuna la ciyaari doonaa Australia oo si play-offs ah uga soo gudubtay Syria isku cel-celis dhan 3-2.
Qaaradad Asia: Qaaradaan baaxadda leh waxey kaliya leedahay 5-wadan, 4-ka mid ah waa toos, halka 2-wadan ay ciyaari doonaan play-off ay ku matalayaan qaaradda Asia, ka hor inta aysan play-off final ah ciyaarin si ay u gaaraan koobka Aduunka.
Wadamada soo gudbay: Sauid Arabia, Japan, South Korea & Iran.
Wadanka Australia ayaa usoo gudbay inuu ciyaaro Play-offska ugu dambeeya ee looga qeyb galo koobka Aduunka Honduras ayuuna la ciyaari doonaa.
Qaaradda Africa: Qaaradda Afrika waxey leeyahiin 5-wadan oo toos ah, mana jirto wax play-offs ah oo ay maraan.
Kaliya wadamada Masar iyo Nigeria ayaa xaqiijiyay iney usoo baxeen koobka Aduunka, waxaana la sugi doonaa ilaa bartamaha November – sadexda wadan ee kale.
Sidaas darteed waxaa si toos ah koobka Aduunka ugu soo baxay tiro wadamo gaaraya: 23-wadan.
Dowlada Ruushka ayaa ka mid ah oo martigaliyayaasha ah iyo 22-wadan oo kusoo baxay wadada tooska ah ee isreeb-reebka koobka Aduunka.